WPS Office Beta ho an'ny LINUX. | Avy amin'ny Linux
WPS Office fantatra ihany koa ho Birao Kingsoft dia orinasa sinoa mamorona efitrano misy birao misy tontolo iainana mitovy amin'ny an'ny MS Office. Maimaimpoana ny Biraon'ny WPS fa loharano mihidy. Nanapa-kevitra ny hiditra io orinasa sinoa io GNU / Linux miaraka amin'ny efitranon'ny biraon'izy ireo.
Hatreto ny orinasa dia manome kinova BETA ho an'ny GNU / Linux miaraka amina maritrano 32-bit, izay azo alefa ihany koa GNU / Linux Miaraka amin'ny maritrano 64-bit, misy amin'ny teny sinoa sy anglisy izy io.
Izaho manokana noho ny te hahafanta-javatra dia nametraka azy io hahitako hoe nanao ahoana ny tontolo iainan'ity suite ity Linux Mint 14 miaraka amina maritrano 64-bit. Avelako ho anao ny horonan-tsary nakariko tao amin'ny Youtube, mba hahitanao ny tontolo manodidina ny BETA an'ny WPS Office.
Ampidiro ny WPS Office amin'ny Ubuntu na Linux Mint miaraka amina maritrano 64-bit
Vantany vao alaina ny fonosana WPS Office dia sokafanay ny terminal sy ny toerana.
ireo tranomboky ireo dia hamela antsika hitantana ny Office WPS Ubuntu, Linux Mint, Fedora y OpenSuse miaraka amina maritrano 64-bit. Avy eo dia apetrakay amin'ny tanana tanana ilay programa.
Ovay ny fiteny amin'ny teny sinoa ho amin'ny teny anglisy
Manokatra ny Biraon'ny WPS izahay ary manidy azy. Avy eo manokatra ny terminal izahay ary manoratra:
Avy eo ity fehezanteny manaraka ity:
Ho famaranana, heveriko fa tsara ny fahalalana fa ny GNU / Linux dia mandeha matanjaka any Azia. WPS Office dia loharanom-baravarana mihidy, saingy mbola safidy hafa ho an'ny mpampiasa GNU / Linux ity.
Tsara ihany koa ny mahita fifaninanana hanatsarana ny suite biraon'ny GNU / Linux. Mazava ho azy fa ny fahatsapako dia hiaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana foana, izany hoe, LibreOffice, Calligra, AbiWord, sns. Azon'izy ireo atao ny manome ny heviny manorina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WPS Office Beta ho an'ny LINUX.
Tsy azoko antoka raha mety ho lasa fifaninanana ho an'ny efitrano misy ny birao ao amin'ny Gnu / linux izany, satria tsy maintsy ho malaza eo amin'ireo mpampiasa izany, saingy mahaliana ny mahita ireo orinasa te-hiditra amin'ny Gnu / linux.
Tsy fantatro raha manan-kery amin'ny hevitry ny fampiasana ny lazan'ny lazan'ny ... Raha ampiasaina any Shina dia misy tapitrisa vitsivitsy izay hampiasa azy ...
Notsapaiko tamin'ny windows izany ary tsy maintsy lazaiko fa aorian'ny trauma amin'ny fiteny, dia tena clone of office 2010 (saingy azonao atao ny mametraka ny bokotra amin'ny fomba 2003), ary tena mahavariana, mifanentana amin'ny docx, xlsx, ary pptx tena tsara
Raha tamin'ny Espaniôla ...
Ity rindrambaiko ity dia "malaza" amin'ny Android, ka io no mety ho vavahadinao.
Heveriko fa tsy hihinana ny tsena izany, fa angamba hanosika azy io hihena ka tsy hipetraka irery ny LibreOffice
Mifikitra amin'ilay interface LibreOffice aho 😀
Tena tsy azoko ireo mampiasa birao maimaim-poana
Mamaly amin'ny menio
Toa tsara! Raha mamoaka fonosana fiteny ho an'ny Linux izy ireo indray andro any, amin'ny teny Espaniôla dia apetrako 🙂 ary esoriko ny libreoffice
Mitovy hevitra aminao aho. Inona koa, antenaiko ny LibreOffice manatsara ny fifandraisany amin'ny antontan-taratasin'ny Office.
Kingsoft officce dia mampiasa ny rakibolana LO.
Inona no tianao holazaina amin'ny fampiasana rakibolana LO, izany hoe azo atao ve ny misintona rakibolana hanitsiana ireo lahatsoratra amin'ny teny espaniola ???
Ampiasaiko amin'ny Android izany ary mampientanentana azy, saingy avelako eo izy, tsy mino aho fa hametraka azy amin'ny PC 🙂
izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny android, tsara kokoa noho ny birao malala malalako aza
Ao amin'ny Archlinux dia ahitanao azy amin'ny AUR toy ny wpsforlinux, farafaharatsiny toa klone ofisialy 2007 izany, ho avy izao ny fotoana hitsapana azy amin'ny fampifanarahana endrika hahitana hoe manao ahoana izany.
Oh tsara amiko izany fa tsy tiako mihitsy ny fomba fijeriny openoffice / libreoffice na dia mieritreritra aza aho fa tsy hanova azy ho an'ny google docs izay ankafiziko izao>.
Tena tiako izany eny, saingy… loharano nikatona sy rindrambaiko sinoa? WTF !! , tsy misy vazivazy ampiasaiko izany.
Efa nanao akaiky kely aho ary afaka manome toky anao fa ny Libreoffice dia tsara kokoa noho io, indrindra rehefa miresaka format mifanentana dia tsy afaka manokatra endrika OOXML akory, zavatra ataon'ny Libreoffice. Ny azoko ekena dia ny hoe Libreoffice dia tsy maintsy manova ny endriny, satria rindrambaiko tsara izy io.
HA HA HA HA HA HA! Ilay lazaiko ihany. Aona, avelao izay ...
ireo sinoa ireo, manao kopian'ny zavatra rehetra….
Ny fitoriana an'i Microsoft tao amin'ny 3 .. 2 .. 1 ..
Sinoa izy ireo, kely ny vitany! xD
Elav…. Corel Word Perfect .. Tsy maintsy manana fehezanteny mandritra ny fotoana fohy aho …… Heveriko fa adikao tsara kokoa amin'ny Office …… .. http://www.muypymes.com/wp-content/uploads/2012/12/corel-office.png .
Corel dia tsy orinasa kely.
Corel WordPerfect dia raiben'i Microsoft Word. Ny WordPerfect dia nanjary nalaza tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 80, ary tany am-piandohan'ny taona 90, Microsoft Word dia nandresy azy io raha ny amin'ny fifanarahana amin'ny birao Windows taloha. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, ny Word sy ny sisa amin'ny biraon'ny Office dia natambatra noho ny fifandraisan'izy ireo efa voaorina tsara raha oharina amin'ny fahafaham-po taloha izay tian'i WordPerfect GUI hambara.
Sinoa izy ireo…
Raha mitory ny Sinoa i Microsoft dia lazain'ny Sinoa amin'izy ireo hoe: "okay, andoavy US." Na mbola tsara kokoa aza raha toa ka sosotra izy ireo ka nandray an'i Etazonia. Total, amin'ny trosan'ny Etazonia amin'i Shina, tsy isalasalana aho fa tena lavitra ny zava-misy izany ... xD
Eny, mahafinaritra ahy ilay interface, araka ny voalaza etsy ambony dia ampiasaiko amin'ny android izany ary toa tsara (ampy hilazana azy aho). raha mifanaraka amin'ny vba dia ho faly aho !!!!!!
O________O Tsy dia mahagaga ahy loatra izany, rehefa dinihina tokoa dia CHINESE izy ireo ... XD
Na izany na tsy izany dia hitako fa mahaliana ny mampivoatra ny sinoa sy ny maro kokoa amin'ny olona ao amin'ny GNU / Linux ... Betsaka isika ary hitombo kokoa hehehehe .... Tsara ny fampiharana, na dia amin'izao fotoana izao aza dia mijanona miaraka amin'ny LibreOffice ratsy tarehy nefa mahery aho.
Tsy mametraka lozisialy nikatona na rindrambaiko pod nikatona (na firenena kominista hafa) aho !!!
TSY maintsy feno Spywares izany ary ratsy kokoa.
Misy rindrambaiko bebe kokoa izay misy spyware ary tsy fantatsika akory izany, ary ny Ubuntu miaraka amin'ireo plugins vaovao dia manao toy izany ihany koa, ho an'ny amazona ihany.
Miala tsiny fa iza no mampiasa ubuntu avy eo XD.
@Fenix, tsy haiko raha hitanao izany, fa ny ataon'ny plugins Ubuntu dia ny fanaovana fikarohana any Amazon amin'ny fomba haingana kokoa noho ny hoe manokatra ny browser amin'ny fomba nentim-paharazana ianao, ary miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe amin'ny Spyware, AZO ATAO DECIDEDE Raha te hametraka azy ianao na tsia, izany hoe raha tsy tianao hisy olona any Amazon hahita "ny drafitrao mahatsiravina O handresy an'izao tontolo izao" satria tsy fantatrao hoe aiza no misy eo amin'ny PC-nao, dia esorinao fotsiny ilay solomaso faly sy voila, vita ny majika ...
Ny olana dia tsy izay rehetra mampiasa Ubuntu no mahay manaisotra ny Lens .. ary eo no mitranga ny tranga, ary miseho ny zavatra vetaveta Gay rehefa novakiako tato ho ato .. 😛
Raha ny marina, dia roa isika ...
Raha loharano misokatra dia tsy hanana olana amin'ny fametrahana azy aho hehehe
Mampiahiahy ahy kokoa fa Amerikanina izy fa tsy Sinoa, marina!
TPT …. marina izany ... tsy misy mahalala hoe manao ahoana ny Biraon'ny Microsoft ao anatiny…. eo amboninao dia mandoa Microsoft…. ary angatahin'izy ireo aminao ny lakilen'ny vokatra, hahazoana antoka fa tsy vokatra piraty izany.
Nangalarinao tamin'ny vavako ...
Ny tena marina dia tsy hanimba LO izany ny fiovan'ny fisehoana mitovy amin'izany, satria toa mandany fotoana amin'ny fiteny Espaniôla ity "Biraon'ny WPS" ...
Misafidy LO aho hanohana rafitra hoditra tena azo ovaina, mba hahafahan'ny tsirairay mihetsika sy miova arak'izay tadiaviny, fantatro fa sarotra izany, saingy safidy mety izany!
Novakiako i Giskard ary nampahatsiahy ahy an'ireo izay miresaka rindrambaiko maimaimpoana izy nefa tsy fantatro! xD
Matotra, toy ny hoe avy amin'ny firenena kominista ihany no misy spyware cofcofcofGooglecofcof.
Tsia. Nefa tsy hanadihady ahy ny CIA satria eo an-daniny ara-teknika aho. Kapitalista izy ireo ary izaho koa. Mipetraka amin'ny firenena "mpiray dina" koa aho. Tsy "fahavalonao" aho. Saingy ny Sinoa dia mety ho noho ny fahasamihafana.
Na izany na tsy izany dia TSY MAMPIASA SOFTWARE CODE (na inona na inona karazana) aho, fa raha izaho no nomena safidy teo amin'ny iray natao tany Etazonia sy ny iray hafa tany Chine (ary tsy nanan-tsafidy aho) dia nofidiko ilay avy any Etazonia.
Manantena aho fa ny fanazavako dia nahatonga anao hahatakatra bebe kokoa ny fomba fijeriko.
Ny Kiobàna iray no aleon'ny mpanjifa mampiasa lavitra an'i Shina? haha ity mbola tsy hitako,
Haha fa tsy ny firenena kominista ihany fa izy ireo no manadihady mahatadidy fa ny firenena kominista dia lasa kominista hiaro ny tenany amin'ireo firenena kapitalista, tamin'ny ady sy fifandonana taloha.
Tsy namako kiobaney aho. Raha ny marina dia 2 km eo ho eo avy eo amin'io nosy io aho.
Fanitsiana: 4 km eo ho eo.
Goanfrimon dia hoy izy:
Tsy maintsy ny telefaona finday an'i China izany, sa tsy izany?
Mamaly an'i Goanfrimon
Tsy misy holazaina dia hoy izy:
: kohaka: kohaka :: Aza miteny amiko:
Raha ny marina dia manadihady na ny olom-pireneny aza ny gringo intelligence ary hiteny ianao fa tsy hanadihady anao izy ireo satria firenena mpiara-dia aminao hahaha, koa ny isp an'ny usa dia hitsikilo anao mba tsy hampidirinao ny atiny piraty amin'ny tamba-jotra p2p ary raha hanao izany ianao dia hamindra anao any mamaky ny lalàna manohitra ny piraty ianao ary mametra ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisanao ho sazy.
Hilaza ve ianao fa tsy mampiasa rindrambaiko nikatona? Hiresaka momba ny fampiasana fototra aho. MP3, RAR, FLASH PLAYER no maneno anao sa tsy ampiasainao?
Momba ilay rindrambaiko dia safidy tsara ho an'ireo mifindra monina avy amin'ny windows mankany ubuntu na maniry safidy hafa maimaimpoana amin'ny windows, izy ireo dia hifanaraka haingana, tiako izany ary hatolotro azy!
Raha hiresaka momba ny spyware isika, Google Chrome no mpanjaka ary malaza be io, saingy satria ampiasaina io dia tsy misy azo ambara.
Mamaly na inona na inona holazaina
Tsy hiankina amin'ny niandohan'ny mpamorona aho. Araka ny fomba fiasao dia misafidy ny fampiharana izay tiako indrindra aho. Ny geopolitika amin'ny rindrambaiko dia tsy mandoko na inona na inona (ny spyware dia tsy noforonina tany Shina).
Raha mitantana fampahalalana marefo ianao izay mety hanimba ny filaminan'ny firenena kapitalista, aza manaraka ny ohatra omeko. Manjaka ny fahavalon'ny fahavalo ;-).
Hari Seldom dia hoy izy:
Eny, raha manome safidy ahy izy ireo dia hofongorako ny milina fanoratana taloha.
Valiny tamin'i Hari Seldom
tena yankee izany
Tsy apetrako io na dia te hahafanta-javatra fotsiny aza, adala ve isika sa ahoana?
Fa maninona no mila mifandray amin'ny Internet ny suite birao REHEFA TSY NITADY IZANY IZY?
Mampiseho izany fa ny singa manakiana indrindra amin'ny fiarovana ny solosaina dia ny mipetraka eo alohan'ny solosaina.
Hahahaha toa tsara izany, saingy mitazona ny LibreOffice tiako io ary rindrambaiko maimaim-poana 100%, mbola tsy manokatra LO aho hijerena ny interface anaovako azy fotsiny haha ​​haha
mmm hafahafa izany, izaho dia nihazakazaka tena tsara, na dia izao aza dia mampiasa calligraph amin'ny zavatra rehetra.
Tiako ity efitrano fiasan'ny birao ity, manana hafainganam-pandeha mahavariana izy, mora ampiasaina, ambany ny fanjifana loharanom-pahalalana ary ny fotoana famaliana alohan'ny maimaim-poana.
Midina hizaha toetra.
Ao amin'ny Kubuntu 12.10 x64 misy ahy LibreOffice 4.0.1 ary ho an'ny zavatra sasany izay tsy mandeha tsara dia ampiasaiko ny MS Office 2010 izay napetrak'i Playonlinux.
EDIT: Tsy manokatra ny fampisehoana, ny takelaka efa tonta tanteraka ary ny hany mpanoratra izay mandeha tsara dia ny Mpanoratra ... manala.
Tsy te hiteny ho mpitsara aho fa tsy apetrako any amin'ny helo izany! Izany dia tsy maintsy nampidirina karazana haitao izay mirakitra ny olona amin'ny zava-drehetra aza ary maty ny fakantsary ... tandremo 'raha manoratra antsika izy na dia maty aza ny solosaina ary mihaino resaka izy ireo. Oad!
Ny mifanentana amin'ny .odt araka ny itiavany azy? Izany no ilazako azy satria nametraka azy tamin'ny android aho ary tsy nisy.
Etsy andanin'izany, misy mahalala ve ny fisian'ny fampiharana automation an'ny birao ho an'ny android mifanaraka amin'ny .odt sns? ny mpamaky ihany no hitako, fa tsy misy ny fanitsiana
Toa tsara izany, fa isika izay zatra miasa miaraka amin'ny Libreoffice dia tsy hahazo aina loatra. Na dia vaovao tsara aza fa ny fitovizan'ny interface dia mety mahasarika olona maro kokoa amin'ny tontolon'ny rindrambaiko malalaka ary afaka amin'ny farany. Ny zavatra ratsy hitako amin'ny WPS dia ny tsy fanohanany .odt na .odp 🙁
Misy mahalala ve ny ondrilahy laniny? Satria raha mihoatra ny 300 mb na mihoatra ny 200 mb aza dia misy spyware, fa raha tsy programa kely fotsiny no manao izay lazainy ary raha tsy amin'ny Espaniôla dia tsy apetrako izy .
Politikan'ny Vaio XD-ko.
Na dia heveriko ho tsy mandanjalanja aza ny interface, efa ho klone of office 2007 sy 2010.
Angamba raha ny interface dia mitovy fa ny karazana gtk kokoa na tsotra kokoa fa manaja ny rafitry ny puce foana dia apetrako, ary tsy satria sinoa izany; raha ny marina dia tsy matoky an'i Etazonia kokoa noho ny Etazonia aho.
azafady fa te hiteny aho hoe China XD.
Hitan'i Merlin izay ataon'i Corel amin'ny Corel Word Perfect. .. ..
Corel dia manao ny fampiharana 2010 clone ho klone
Ho sinoa na inona no tadiavin'izy ireo, fa satria mifanaraka amin'ny makro VisualC ++ amin'ny latabatra excel, apetrako IZAO NOW
Lazaiko amin'izy ireo fa manandrana manampy amin'ny vondrom-piarahamonina LibreOffice aho.
Omaly nisy profil iray nandeha tany amin'ny rindrin'ny LibreOffice tao amin'ny Google +, ary namoaka ity horonantsary ity aho.
Nisy quilombo nipoitra teo amin'ny rindrina. Nangataka ny hanova ny interface interface ho LibreOffice ilay tovolahy.
Ireo mpampiasa LibreOffice dia niantso azy io hoe TROLL.
Heveriko fa nofafany ny lahatsoratr'izy ireo.
Ho ahy dia tsara ny mahita ny hevitr'ireo mpampiasa ny fiarahamonina GNU / Linux.
Juan Carlos Navarro dia hoy izy:
Damn, inona no ilàna ny fanekena rafitra manafintohina raha tsy afaka manatsara azy io ny olona iray, na dia hanaiky aza isika fa mitsikilo antsika izy ireo ary manao rafitra iray izay amidin'izy ireo taty aoriana amin'ny fandaniana ireo kaonty an-tsitrapo nataon'ny olona zato.
XAza ho lavo amin'izany, ny Office beta ho an'ny GNU / LINUX dia tsy inona akory fa ny farango hanohy hitsikilo izay ataontsika amin'ny tontolo malalaka ary avy eo hanao zavatra tsara kokoa amin'ny tontolon'ny tsy miankina.
Valiny tamin'i Juan Carlos Navarro
hanatsarana libreffice ny iintreface ary manampy
aingam-panahy avy amin'ny blender: http:http://lh3.ggpht.com/_1QSDkzYY2vc/TEh0OMjuBTI/AAAAAAAABjA/v1ugkEG4IFI/blender-2.53.png
na tsara kokoa noho ity interface ity
Mamaly an'i alberthdez
spyware dia hoy izy:
Fampiharana sinoa hametraka antontan-taratasy izay mifandray amin'ny Internet amin'ny fomba tsy fantatra nefa tsy nangatahina hoe: «fotsy sy tavoahangy»
Valio ny spyware
Tena tsara izany, hoy aho satria amin'ny alàlan'ny fametrahana ny loharanom-pahalalana an'ny MS ny WPS dia afaka manokatra ny teniko sy ny antontan-taratasiko rehetra, satria ity farany dia tsy mba tsara tarehy mihitsy. Namerina ny vokany rehetra izy io, ary manana fifandraisana mahazatra, raha ny tena izy, afaka namorona pptx mora be aho izay toa tsara tanteraka tao amin'ny biraon'ny MS, tonga lafatra afaka nampiasa linux ary nandefa ny asa tany amin'ny mpiara-miasa amin'ny oniversite izay antenaina hahalala fa misy windows XP sy 7
Mikasika ny niandohana, raha milaza isika fa Sinoa io dia heverinay fa tsy dia misy kalitao io, satria tamin'ity tranga ity dia nampiasaiko nitady ny lesoka io ary tsy nanana olana na nihena na nianjera tamin'ilay programa aho. Heveriko fa tsy mitsikilo ny programa, ary na dia nanao izany aza izy, ny tena zava-misy marina amin'ny fizahana programa hafa amin'ny Internet.
Mbola tokony hohajaina ho an'ny Tandrefana izy io, satria mampiseho fa natao ho an'io kolotsaina io izy, tsy mahita intsony ny tranokalany sy ny pejy fandraisana izay mifandray amin'ny Internet noho ny hoe azo foanana, na mampiasa firewall raha sendra misy fijerena azy.
Raisinay ho tombony ny fampifanarahana endrika sy ny endrika malaza (sy azo ovaina) ary ny fetran'ny fiteny ho toy ny fatiantoka antenaiko fa hovahana tsy ho ela.
Gremy1987 dia hoy izy:
Ahoana no ahafahanao mamono ny pejy fandraisana
Vao nametraka azy io tamin'ny PC aho fa efa nampiasa azy io tamin'ny android, raha ny fahitako azy dia safidy tsara io satria fantatsika rehetra, na dia manana birao malalaka ao amin'ny GNU / Linux aza izahay, dia tsy mitovy izany. mifanentana amin'ireo antontan-taratasy noforonin'i Microsoft Office, ary raha ny ahy fa nivadika tanteraka hampiasa ny Ubuntu aho dia manana olana rehefa mampiasa antontan-taratasy .docx sy .pptx miaraka amin'ny LibreOffice.
Tsy milaza aho hoe tonga lafatra ity Programme ity ary afaka manolo an'i Microsoft izy io, fa manombatombana ny fahombiazany sy ny fotoana ao amin'ity Rafitra miasa ity, heveriko fa io no akaiky indrindra.
Tsy mpampiasa Ubuntu manam-pahaizana aho ka aza manevateva an'io.
Nivoaka ny kinova WPS na KingSoft ho an'ny Linux vaovao.
Sarin'ny kinova vaovao an'ny KingSoft Office Beta ho an'ny Linux
Efa nanandrana ny kinova farany navoakan'izy ireo aho ary tena tsara izany miaraka amin'ireo sary masina vaovao ary afaka misafidy fiteny sinoa na anglisy ianao, saingy mbola tsy ovako ho an'ny LibreOffice izany mandra-pamoak'izy ireo ny kinova espaniola dia tsy hovahako mihitsy izany fa tena mahaliana ity fanavaozana farany navoakan'izy ireo ity.
Raha mampiasa LibreOffice 4.0.x ianao dia afaka manandrana ireo sary masina novolavolako ho an'ny LibreOffice.
Azonao atao ny mahita sy misintona azy ireo amin'ity lahatsoratra nataoko ity.
Jose Al dia hoy izy:
faly be aho fa faly mandray ny linux fa malahelo izy ireo afaka manadino loharano malalaka sy malalaka
Valiny tamin'i Jose Al
Jose Al… Hitako fa mampiasa ny WPS OFFICE ireo mpampiasa Elementary OS ary nametraka ny LibreOffice ho hadino ary hadino satria tsy maoderina ny endriny.
Ny isan-jaton'ny mpampiasa tanora dia mihevitra izany koa.
Aleoko ny FreeOffice. Vonona ny handoa izany Suite izany aho.
Ahoana ny fametrahana azy amin'ny teny espaniola. MISAOTRA
jdra dia hoy izy:
Ny tohin'ny Chavez dia namela ny tsy fahalalana betsaka kokoa noho izay efa nisy teo amin'ny tontolo fahatelo, ny famakiana ireo fanehoan-kevitra izay nizaran'izy ireo vokatra iray avy hatrany no nahamenatra ahy. Point 1, KingSoft dia tsy orinasam-panjakana sinoa. Ny teboka 2, MSOficce dia novolavolain'ny olona maro (anisan'izany ny sinoa). Ny teboka 3, raha manana an'ity rindrambaiko amin'ny teny Espaniôla ity isika dia hiankina amin'ny habetsaky ny faniriantsika handray anjara amin'ny fiaraha-monina. (http://wps-community.org/download/)
Mamaly an'i jdra